Madax isku dhaf heer caalami ah oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada hoose – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2013 4:50 b 0
Kismaayo, October 22, 2013 – Magaalada Kismaayo ee xaruunta Jubbada hoose waxaa maanta gaaray wefdi heer caalami ah oo ka socda, midowga Afrika, midowga Yurub, xafiiska UNSOM ee Qaramada midoobey iyo Britian.
Masuuliyiinta heerka caalami ayaa la sheegay in ay u taageen Kismaayo in ay taageero u muujiyaan heeshiiskii dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubba ay ku gaareen magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya 28 agoosto.
Michele Cervone oo ah wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa wefdiga hugaaminaya, waxaana ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda maamulka KMG ah ee Jubba iyagoo ka wada hadli doona arrimo badan.
Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka wefdi uu hugaaminayo iyo madaxweynaha Jubba ayaa shalay xaliyey khilaaf ka dhashay shir dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka oo wejigiisa koowaad lagu qabanayo Muqdisho kan labbaadna lagu qabanayo Kismaayo.
Madaxda heerka caalami ee Kismaayo gaaray ayaa la filayaa in ay u kuur geli doonaan xaaladaha gobolka oo idil, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdikariin Guuleed waxaa uu sheegay in xaalad bini?adanimo ay ka jirto jubbooyinka isagoo hay?adaha ka dalbaday in ay tagaan gobolka.